Malunga nathi -Chengdu Zhihongda Nonwoven Bag Co., Ltd.
Chengdu zhihongda nonwoven bag Co., Ltd.yasekwa ngo-2013, ibekwe e Chengdu, kumzantsi-ntshona China, ikakhulu inxaxheba kwiingxowa non-ephothiweyo, ibhegi yomqhaphu, iingxowa ngelaphu, iingxowa ipholiyesta, ibhegi enamavili, ibhegi elaminethiweyo, ibhegi yomtya, iingxowa ezipholileyo, iingxowa zengubo, ezinye iimveliso ezingalukanga kunye nokupakisha imveliso ye-eco. Lishishini lemveliso elidibanisa uyilo, i-R & D, ukuveliswa kweebhegi kunye nenkonzo, kunye nokubonelela ngezisombululo zeebhegi ze-Eco.
Sineminyaka engaphezu kwe-10 yamava obuchule kwimveliso ye-Eco-bags. Sibonelela ngee-Eco-bag kwiimarike zalapha kunye nokuthumela ngaphandle kwiimarike zaphesheya, njengeYurophu, iMelika, Canada, Australia, Japan, Singapore, njl. Kwii-odolo ze-OEM, sinokunceda ekwenzeni zonke iinkqubo zemveliso, ukusuka kumbono ukuya kwimveliso yokugqibela, kakuhle; kwii-odolo ze-ODM, zininzi izinto onokukhetha kuzo.
Iingxowa zethu zi-eco-friendly kwaye zihlala ixesha elide, yindawo elungileyo yentengiso esitalatweni. Ingxowa yoyilo eyahlukileyo iya kukuzisela izibonelelo ezingenasiphelo kukhuthazo kunye nokusekwa kwegama, ihlala yomeleza uphawu lwakho’s umfanekiso xa usebenzisa. Inkampani yethu inyanzelisa ukuba isebenzise iindlela zokushicilela ezinobuhlobo kwindalo kunye nezinto eziphindiweyo nezomeleleyo kwiibhegi zethu.
U-CHENGDU ZHIHONGDA uza kuba ngoyena uphambili kwishishini leengxowa ze-eco. Injongo yethu kukubonelela ngeengxowa ezisemgangathweni onamaxabiso afanelekileyo kubathengi abohlukeneyo kwihlabathi liphela. Injongo yethu kukunceda abathengi bethu ukuba babeke umfanekiso olungileyo kunye nokukhusela okusingqongileyo. Sithanda ukwamkela iimfuno ezahlukeneyo zabathengi bethu kunye nemibono, ukugcina ukuphuhlisa iibhegi ezintsha ze-eco kubathengi bethu. Sinikezela ngeenkonzo zobungcali kubathengi bethu ukugcina ixesha kunye neendleko zabo.
U-Chengdu zhihongda unezixhobo ezizeleyo zokwenza iibhegi ze-eco, ebefuna indlela yemveliso ezizenzekelayo kunye nokuthunga okukhethekileyo. Iqhubele phambili umatshini wokuprinta we-gravure esithoba, umatshini wokulaminetha, zonke iintlobo zoomatshini bokuthunga, malunga ne-106 yabasebenzi bokushicilela bekrini kunye nabasebenzi bokuthunga.
Iqela lethu lokuthengisa liyazi ngokupheleleyo iimfuno zabathengi ezenziwe ngabakho, ezinje ngobungakanani be-eco bag, ilogo kunye nokuprinta ipateni, ukhetho lwamalaphu, ukhetho lwenkqubo, njalo njalo. Sisebenza kunye nabathengi bethu ukwenza konke okusemandleni ethu. Ixesha lokuhambisa libaluleke kakhulu kuthi, kuba asinakuphosa abathengi bethu 'besebenzisa imihla. Kwimeko yongxamiseko kwimveliso, siya kwazisa umthengi kwangexesha.
Kwiminyaka ethile edlulileyo, abarhwebi kwihlabathi liphela babesetyenziselwa ukubonelela ngeeplastiki simahla kubathengi. Olu hlobo lokusetyenziswa kwezinto ezilahlwayo kwingxowa yeplastiki kunzima ukwehliswa isithuba seminyaka elikhulu kwaye ichazwa "njengongcoliseko olumhlophe". Ekuthandeni indalo kunye neebhegi tote, siye saseka inkampani "Zhihongda" ukubonelela iingxowa eco-friendly emarikeni.
Igama lenkampani yethu "uZhihongda" linethemba lokuba singadibana senze indawo efanelekileyo yokuhlala, ukufezekisa injongo yethu yenkampani.
Ukuphila kwethu kwemihla ngemihla kudala ungcoliseko. Luxanduva lwethu ukunciphisa ukungcoliseka kwendalo. Ekuphuhliseni nasekungeniseni iimveliso ezintsha, sihlala sinikela ingqalelo kwimiba yendalo esingqongileyo. Kule minyaka idlulileyo, besijamelene nobunzima obuninzi kwaye siyabulela inkxaso evela kubaxumi bethu.
Intsingiselo ye-Eco Bag
Iingxowa ezinobungakanani be-Eco ziyilelwe kwaye zaveliswa ukuze zisetyenziswe kwakhona, ukunciphisa nokuRisayikilisha.
Ingxowa ephothiweyo: Ngokubanzi, ibhegi enye inokusetyenziswa kwakhona ngaphezulu kwamaxesha ali-100.
Ingxowa yomqhaphu: Ngokubanzi, ibhegi enye inokusetyenziswa kwakhona ngaphezulu kwamaxesha angama-200.
I-Canvas Bag: Ngokubanzi, ibhegi enye inokusetyenziswa kwakhona ngaphezulu kwamaxesha angama-400.
Ilinen Bag: Ngokubanzi, ibhegi enye inokusetyenziswa kwakhona ngaphezulu kwamaxesha angama-500.
Inayiloni enamavili Ingxowa: Ngokubanzi, ibhegi enye inokuba ngaphezulu kwamaxesha e-300.
YangamaNayile yeNylon: Ngokubanzi, ibhegi enye inokusetyenziswa kwakhona ngaphezulu kwamaxesha angama-500
Elaminethiweyo Nonwoven Bag: Ngokubanzi, ibhegi enye inokusetyenziswa kwakhona ngaphezulu kwamaxesha angama-200.
Elaminethiweyo ephothiweyo Bag: Ngokubanzi, ibhegi enye inokusetyenziswa kwakhona ngaphezulu kwamaxesha angama-300.
Iphepha eliDibeneyo lePhepha: Ngokubanzi, ibhegi enye inokusetyenziswa kwakhona ngaphezulu kwamaxesha angama-30.
Umqhaphu weLaphu leCotton: 100% yemathiriyeli yendalo, inokuba yinto yokugqibela yokwahlulahlula emva kokulahlwa.
Ilinen Bag: 100% yemathiriyeli yendalo, inokuba yinto yokugqibela yokwahlulahlula emva kokulahlwa.
Indawo yokuhombisa iphepha: 100% yemathiriyeli yendalo, inokuba yinto yokugqibela yokwahlulahlula emva kokulahlwa.
Ingxowa ephothiweyo: Izinto ze-PP ezingezizo ityhefu nezingenasongo, ziya kuthotywa malunga neenyanga ezi-3 emva kokuba zilahliwe, iqala ukuthoba isidima kwaye ibe ngumgubo kwaye idibane nendalo emva kweenyanga ezili-12.
Elaminethiweyo Bag: It is non-toxic and odorless PP material, iya kuthotywa malunga neenyanga ezi-5 emva kokulahlwa, iqala ukuthotywa kwaye iba ngumgubo kwaye idibane nendalo emva kweenyanga ezili-18.
Ingxowa engalukwangaI-10% -30% yezithako zivela kwizinto ze-PP ezenziwe ngokutsha. Isenokuphinda iphinde isetyenziswe kwakhona ukuba iphathwe kakuhle.
Bags ephothiweyoI-20% -50% yezithako zivela kwizixhobo ezi-recycled PP. Isenokuphinda iphinde isetyenziswe kwakhona ukuba iphathwe kakuhle.
Iingxowa zePETI-80% -100% yezithako zivela kwiibhotile zeplastiki ezihlaziyiweyo. Isenokuphinda iphinde isetyenziswe kwakhona ukuba iphathwe kakuhle.
SAMPLE SIMAHLA ESITOKWINI! Sijonge phambili ekufumaneni iimfuno zakho ezithile, iisampulu kunye nokuprintwa kwepateni. Nceda unxibelelane neqela lethu lobuchwephesha kwangoko!